TOP NEWS: Gaas iyo Sharmaarke oo si wada jir ah u booqday Dhaawacyada Ciidamada Puntland + Sawiro – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Gaas iyo Sharmaarke oo si wada jir ah u booqday Dhaawacyada Ciidamada Puntland + Sawiro
by admin 28th March 2016 166
Garowe, March 28, 2016….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, oo weheliyo Madaxweynaha Maamul Gobolleedka Puntland, Mudane Cabdweli Maxamed Cali Gaas, Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah iyo Puntland, ayaa maanta booqday qaar kamid ah dhaawacyadii ay wax yeelladu ka soo gaartay dagaalkii dhawaan ay la galeen Ciidamadda Puntland kooxda Argagixisada ah ee Al-shabaab. Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa xariga ka jaray Mashruuca Taakuleynta Isgaarsiinta (ICT) oo ah mashruuc lagu marumarinayo Isgaarsiinta Gobollada dalka.
Ra’iisul Wasaare Cumar ayaa mid mid u booqday dhaawacyada oo ku jirey Isbitaalka weyn ee magaalada Garowe, wuxuna ALLE uga baryey in uu Caafimaad siiyo, isagoo tilmaamay kuwa qaba dhaawacyada daran ay dawladdu gacan ka geysan doonto sidii ay u heli lahaayeen caafimaad dibedda ah.
“Waxaad hurteen naftiina qaaliga ah, waan idiin kaga mahad-celinayaa naf-hurnimadiina iyo dhiiranaanta. Shakina iigama jiro in ciidanka geesiyaasha ah ay sharafteenna iyo karaamadeena soo celinayaan Al-shabaabna laga guuleysan doono, EEBBE waxaan idin kaga baryayaa inuu dhaawaca idiin sahlo oo aad dhaqso u bogsataan.” ayuu ku yiri Ra’iisul Wasaare Cumar askartii dhaawaca ahaa ee uu booqday.
LIVE u dhageyso: Madaxweyne Guulleed oo hada kulamo la qaadanaya dadka ku Nool Deegaanka Af-Barwaaqo ee Bariga Mudug
TOP NEWS: Dhageyso: Guddoonka golaha shacabka oo fariin deg deg ah u diray ra’isul wasaare kheyre iyo magacaabista xukuumadda
Tifaftiraha K24 19th March 2017